दिपा दिदिलाई सच्चिन दिनुहोस् अश्लील गाली नगर्नुहोस् : प्रियंका कार्की | Himal Times
Home मनोरन्जन चलचित्र दिपा दिदिलाई सच्चिन दिनुहोस् अश्लील गाली नगर्नुहोस् : प्रियंका कार्की
दिपा दिदिलाई सच्चिन दिनुहोस् अश्लील गाली नगर्नुहोस् : प्रियंका कार्की
काठमाडौं । नायिका प्रियंका कार्कीले कलाकार दिपाश्री निरौलालाई सच्चिन अश्लील गाली नगर्न अनुरोध गरेकी छिन् । उनले फेसबुकमा एक लेख लेख्दै दर्शकमाझ यस्तो अनुरोध गरेकी हुन ।
उनले भनेकी छन् ” कसैको तर्क, भाव या बिचार आफुलाइ चित्त नबुझे आवाज उठाउने अधिकार तपाइ सबैमा सुरक्षित छ। चित्त नबुझेको कुरा राख्नुस, वहाँलाइ सकारात्मक ढंगले सच्चाउनुस । त्यसको सम्मान पनि हामी गर्छौ। तर सच्चाउने क्रममा अस्लिल गाली, गलौच र चरित्र हत्या कृपया नगरिदिनुस। एउटा गलत बोली या तर्कले कोही ब्यक्तीको चरित्रमै दाग लगाइदिनु त राम्रो होइन।
प्रियंंकाले फेसबुकमा यस्तो लेख्छन् :
चलिरहेको आदरणीय दिपा दिदीको बिवादले हामी सबैको ध्यान आकर्षण भएको छ। यसै सन्दर्भमा दुई शब्द राख्ने अनुमती माग्दछु।
कसैको तर्क, भाव या बिचार आफुलाइ चित्त नबुझे आवाज उठाउने अधिकार तपाइ सबैमा सुरक्षित छ। चित्त नबुझेको कुरा राख्नुस, वहाँलाइ सकारात्मक ढंगले सच्चाउनुस। वहाँ लगायत हामी सबै तपाईंहरबाट सिक्न चाहन्छौ। तपाईंहरुले माया गर्नुहुन्छ, हामीलाइ हौसला दिनु हुन्छ, हाम्रो खुसीमा सहभागीता देखाउनु हुन्छ र त्येसै गरि, हामीबाट केही गलती भएमा हामीलाइ सच्च्याउने र सकारात्मक ढंगले सही मार्ग देखाउने अधिकार पनि यहाँहरुलाइ छ। र त्यसको सम्मान पनि हामी गर्छौ। तर सच्चाउने क्रममा अस्लिल गाली, गलौच र चरित्र हत्या कृपया नगरिदिनुस। एउटा गलत बोली या तर्कले कोही ब्यक्तीको चरित्रमै दाग लगाइदिनु त राम्रो होइन नि।
हाम्रो आफन्त, आफ्नै छोरा-छोरीले केही गलती गरे, हामी के मुख छाडेर, मन परि अश्लील गाली गर्छौ र? गर्दैन्नौ नि। एउटा अभिभावकको नजरबाट सम्झाउछौ, गलती औल्याउँदै अगाडी बड्ने हौसला दिन्छौ, माफी मागे स्वीकारछौ। यहि तरिका हाम्रा देशका छोरी चेलीको लागि पनि अपनाउन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो नि। होइन र?
आखिरमा हामी सबै मानिस हौ। हाम्रो मानसिक स्वास्थ पनि प्रभावित हुन्छ, होइन र? यो बिषयमा ध्यान पुराइदिनुस, विनम्र अनुरोध।
Previous articleकोरोना : मलेसियामा गएको २६ दिनपछि १ जनाको मृत्यु
Next articleबझाङका पहिरो पीडितलाई सुदुरपश्चिमेली नेपाली समाजको राहत
रकमको ’अपचलन’ गरेको भनेर आरोप लगाउनु अराजक प्रवृत्ति : भिम रावल
४३ लाख नगदसहित दाङ्गका एकजना पक्राउ